कांग्रेस कसले सुधार्ने ? महत्वाकांक्षी देउवा,खुम्चिएका पौडेल,अनिर्णित सिटौला ! – SamajKhabar.com
कांग्रेस कसले सुधार्ने ? महत्वाकांक्षी देउवा,खुम्चिएका पौडेल,अनिर्णित सिटौला !
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: ९ माघ २०७४, मंगलवार १६:११
नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नयाँ नेता को हुने भनेर आन्तरिक जोडघटाउ सुरु भएको छ। पार्टीभित्र निकै महत्वपूर्ण मानिने संसदीय दलको नेता बन्न संगठनमा निकै बलियो पकड आवश्यक पर्छ । तुलनात्मक रुपमा लोकप्रिय र आन्तरिक समीकरण मिलाउन सक्ने नेताले नै दलको नेता बन्ने शौभाग्य पाउँदै आएको इतिहास छ कांग्रेसभित्र। यसहिसाबले दलको भावी नेता को हुने भनेर विगतमा झैं यसपटक प्रष्ट अनुमान गर्न सजिलो देखिँदैन।
अहिले चर्चामा आएका नेताहरुमा सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह दलको नेतामा प्रतिष्पर्धा गर्ने देखिएको छ। बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भने कतैपनि नाम चर्चा गरिएको सुनिदैन। कांग्रेसभित्रका शक्ति केन्द्रहरु सर्सर्ती हेर्दा कोइराला परिवारबाट दलको नेता बन्न कोही पनि अग्रसर भएको देखिँदैन।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अपेक्षित भूमिका नभएकोबाट कोइराला परिवारका सदस्य असन्तुष्ट भएको बुझिएको छ। उनीहरु पौडेलले सभापति देउवालाई टक्कर दिएको देख्न चाहन्थे तर पौडेलले निर्वाचनका बेला देशका प्रमुख क्षेत्रहरुमा पुगेर निर्वाचनलाई पार्टीका पक्षमा प्रभाव पार्नुको साटो तनहुँमै अल्मलिएको देखेर कोइराला परिवारका सदस्यहरु खिन्न भएको सम्बध्द सूत्रहरुबाट थाहा भएको छ। अहिले संसदीय दलको उम्मेदवारको च र्चा भैरहँदा पौडेलको नाम कुनै समूहमा पनि उच्चारण नहुनुले उनको उपस्थिति निकै कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ।
केहीदिन पहिले कोइराला परिवारका तीन सदस्य महामन्त्री शशांक,केन्द्रीय सदस्यहरु शेखर र सुजाताले मण्डिखाटारमा सँगै लञ्च खाएका थिए। सुजाताको भान्सामा उनीहरु लञ्च खान मात्र जुटेका थिएनन्। त्यहाँ कांग्रेस पार्टीभित्रको अवस्था,सभापति देउवाको भूमिका र भावी संसदीय दलको नेतामा कसलाई सहयोग गर्दा भविष्यमा फाईदाजनक हुनेछ भन्ने बिषयमा पनि गम्भीर चर्चा भएको एक पारिवारीक सूत्रबाट थाहा भएको छ। खासगरी पार्टीको आगामी महाधिवेशनलाई ध्यानमा राखेर दलको नेतालाई बिचारपूर्वक सहयोग गर्ने रणनीति तीनजनाले बनाएको बुझिन्छ।
गत निर्वाचनमा पाएको निराशाजनक परिणामपछि पार्टीभित्रै आलोचनाको तारो बनेका सभापति देउवालाई अहिले दलको नेतामा अरु कसैलाई सहयोग गरेर आगामी महाधिवेशनमा फेरि सभापतिमा चुनिने रणनीतिमा काम गर्न परिवार र निकटतम सहयोगीहरुले सल्लाह दिईरहेको बुझिएको छ। तर देउवा भने आफैं दलको नेता बन्ने भनेर अडान लिईरहेका बताईन्छ। पार्टीभित्रको युवा समूहले भने गगन थापालाई उपनेताको पदमा ल्याउने वैधानिक र राजनीतिक सुनिश्चितता गरेमात्र देउवालाई सहयोग गर्ने नत्र विकल्प खोज्ने भन्ने सन्देश वालुवाटारमा पुर्याईसकेको थाहा भएको छ।
यता प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जितेका नेता प्रकाशमान सिंहले संसदीय दलको नेतामा देउवासँग प्रतिष्पर्धा गर्ने भनेर बोलिसकेका छन्। तर उनको एक्लो प्रयाश मात्र दलको नेता चुनिन पर्याप्त देखिँदैन। यसका लागि उनले कोइराला परिवारका सदस्य नेताहरु र युवा पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरुको बलियो साथसहयोग जुटाउन आवश्यक देखिन्छ। जसका लागि उनले खासै प्रयाश गरेको देखिँदैन। काठमाडौं बाहिरको संगठनमा सिंहको कमजोर प्रभावले पनि उनलाई दलको नेतामा चुनिन निकै बल गर्नुपर्ने देखाउँछ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भोगेको निराशाजनक हारको घाउमा खाटा नबस्दै यसरी कांग्रेसमा फेरि आन्तरिक पद र प्रतिष्ठाको संघर्ष चर्किएको छ । यही बेला संसदीय दलको नेताका लागि आन्तरिक शक्ति केन्द्रहरुमा लबिङ सुरु भइसकेको छ । सभापति देउवाकै कारण निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोर्नु परेको भन्दै पार्टीभित्र निकै आलोचना भइरहेका बेला देउवाले पुनः संसदीय दलको नेतामा रुची देखाएकोप्रति नेतृत्व तहमै असन्तुष्टि देखिएको छ।
कांग्रेसको विधानअनुसार पार्टीमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने प्रावधान छ । संसदीय दलको नेता हुन सके पार्टी सरकारमा जाने अवसर आएमा सुरक्षित प्रस्थान हुने भएपछि यसमा सभापति देउवाले लालसा देखाएको बुझ्न सकिन्छ।
निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमात्रै जितेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक तर्फबाट विजयी भएका सांसदहरुको मतको आधारमा संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुने निश्चित छ । समानुपातिकतर्फ सभापति देउवाले आफ्नै गुटका नेताहरुलाई बढी प्राथमिकता दिएकाले उनले नै संसदीय दलको नेता जित्न सक्ने भन्दै देउवाको महत्वाकांक्षा बढाउनेहरुको पनि कमी देखिँदैन।
यता कांग्रेसभित्र अलग्गै शक्ति केन्द्रको अभ्यास गरिरहेका पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला पक्षका सांसदहरुले कुन नेतालाई समर्थन गर्छन् भन्ने विषयले निकै महत्व राख्दछ। सिटौलाले इशारा नगरी हलचल नगर्ने सांसदको भूमिका दलको नेता चयनमा निकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। सिटौलाकै विश्वासपात्र भनि प्रचारित गगन थापाले पुराना नेताले विश्राम लिनुपर्छ भनी धावा बोलेकाले पनि सिटौला समूहले देउवालाई सहयोग गर्ने संभावना कम्तीमा तत्कालका लागि संभव देखिँदैन।
-साभार गरिएको सामाग्री ।
९ माघ २०७४, मंगलवार १६:११ मा प्रकाशित